Guyyaan kaanseerii Addunyaa yeroo 12 ffaaf Itoophiyaatti kabajame – Fana Broadcasting Corporate
Guyyaan kaanseerii Addunyaa yeroo 12 ffaaf Itoophiyaatti kabajame
Finfinnee, Amajjii 27, 2011 (FBC)- Guyyaan kaanseerii Addunyaa yeroo 12 ffaaf Itoophiyaatti kabajame.
Sirna kabaja ayyaanichaa irratti kan argaman deetaan ministeera fayyaa Dooktar Liyaa Taaddasaa akka jedhaniitti, kaanseeriin rakkoo fayyaa ta’uu bira darbee, rakkoo hamaa hawaasummaa fi diinagdee ta’uu dubbataniiru.
Dhibeen kaanseerii baasii guddaaf kan nama saaxilu waan ta’eef, baasichi maatii bira darbee dhiibbaa hamaa diinagdee biyyaarraan kan ga’u ta’uu kaasaniiru.
Rakkinicha hundeerraa furuufis mootummaan qaamolee adda addaa wajjiin hojjachaa jira jedhaniiru.
Walitti qabduun koree kaanseerii biyyooleessaa adde Roomaan Taasfaayee gama isaaniitiin, tajaajila fayyaa gama kanaa qaqabsiisaa gochuu fi hubannoo cimsuuf hojiileen baay’een raawwatamaa jiraachuu hubachiisaniiru.
Ammas kaka’umsa haaraa fi hamilee cimaan hojjechuun akka barbaachisu ergaa isaanii dhaamaniiru.
Babali’inni magaalotaa fi haalli jireenyaa dhibeewwaan kanneen akka kaanseerii daddarboo hin taane, akka babal’ataniif gahee mataa isaanii akka qaban ni dubbatama.
Balaa tirafiikaa dabaltee dhibeewwan daddarboo hin taane hamma du’aatii lammiilee harka 100 keessaa 52 gahee kan qaban yoo ta’u, dhibeen kaanseerii immoo harka dhibba keessaa 5.8 gahee qaba.
Waggaatti lammiileen kuma 58 dhibee kaanseriif kan saaxilaman yoo ta’u, isaan keessaa dhibeentaan 67 dubartoota ta’uu ragaaleen ni mul’isa.
Ayyaanichi mata duree “ Mataa kootiis ta’ee lammii koo dhibee kaanseerii irraa ittisuuf kutadhee ka’eera.” Yaada jedhuuni kan kabajame.
Afawarqi Alamuutu gabaase
Dhaabbanni Fayyaa Addunyaa Mana Maree Bakka Bu’oota Ummataatif beekamtii fi…
Daa’ima imala baaburaarratti dhalatteef, kennaan imala bilisaa waggootii 25…
Manni Barnootaa Yakkaatiit 12 fi Iityoo-Jaappaan mana barnootaa bultii addaa…
Finfinneen qulqullina barnootatiif xiyyeeffannaa laattet hojjetti- Injiinar Taakkalaa
Diyaamand Liigii Moorookotiin Atleet Ganzabee Dibaabaa…
Abbaan mm Dr Abiy; obbo Ahimad Aliin boqatan
Karaan Dirredawaa Dawwallee Birrii biiliyoona 5 tuqaa 2n…
Oomaar Al-Bashir turtii ji’a tokkoo booddee muul’atan